सगरमाथाको उचाई नाप्न नेपाली प्राविधिक टोली आधार शिविरमा, को को जाँदैछन् चुचुरोमा ? | Kantipath.com
सगरमाथाको उचाई नाप्न नेपाली प्राविधिक टोली आधार शिविरमा, को को जाँदैछन् चुचुरोमा ?
काठमाडौँ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ नाप्नका लागि नेपालको सरकारी टोली आधार शिविर पुगेर आरोहणको तयारी गरिहेको छ। उच्च हिमाली वातावरणसँग अनुकूल हुन त्यो टोलीका सदस्यले एक चरण सात हजार मिटरसम्मको उचाइ छोइसकेका छन्। अब उनीहरू आरोहणका लागि उपयुक्त मौसमको प्रतीक्षामा छन्।
Previous Previous post: मृगुमा यार्सा संकलनका लागि जेठ १५ गते वन प्रवेश खुलाइने
Next Next post: प्रधामन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा फारम भर्न छुटेकालाई आग्रह